I-Wringer Trolly Factory - Abakhiqizi base China Wringer Trolly, Abahlinzeki
24L / 32L Side cindezela single wringer trolley –H0101 / H0102
Izimbumbulu zendabuko zahlanekezela amanzi ngesandla, ibhakede futhi lisinda futhi kunzima ukuhambisa, lingcolile futhi likhathele. I-wringer trolley ingakhama amanzi angcolile ngokucindezela phansi, ujikeleze ama-casters okuhamba kalula. Ivumela ukuthi kube lula ukuhlanza.
I-36L Side cindezela i-wringer trolley eyodwa B-040
Ukugcina ibhizinisi lakho lihlanzekile akuyona into elula, kepha ukusebenzisa ibhakede le-mop elifanele kungenza kube lula. Noma ngabe uqhuba ibhizinisi elincane noma isikhungo esikhulu, ibhakede le-mop kanye ne-wringer kuyisengezo esidingekayo sayo yonke into kusuka ekuhlanzweni kwansuku zonke kuya ezimangalisweni ezimangazayo.
24L / 32L Phansi cindezela i-wringer trolley eyodwa -H0102 H0104
I-wringer trolley encane futhi elula, enhlobonhlobo yokusetshenziswa, njengendlu, ama-workshops, izindawo zokugcina izimpahla, izikhungo ze-logistics, izitolo ezinkulu nokunye, efanelekayo yonke indawo ephansi.
Yenziwe ngopulasitiki omusha osezingeni eliphezulu. Njengoba liminyene, ibhakede aliqinisekisi futha. Ubuso bawo obushelelezi busiza ukuhlanzwa. Amasondo enziwe ngenjoloba emsulwa, avumela ukuhamba okulula akukho msindo, futhi ayishiyi ithrekhi kukhaphethi.
34L / 46L Phansi cindezela i-wringer double trolley-H0203 / H0204
Ikhanda eliqinisiwe lokukhipha amanzi licindezela isomisi senziwe ngensimbi enhle, okuvumela ukusetshenziswa isikhathi eside. Ukunwebeka akwehli. Intwasahlobo ayiqhekeki. Isibambo sokufafaza esenziwe ngesibambo siwubufakazi bokuguguleka. Umkhiqizo uhle kakhulu phakathi kwemikhiqizo yohlobo lwayo.
Ukuhlanza i-Wax Barrel B042
Ibhokisi lokugcina eliphethwe ngesandla lingagcina amathuluzi, izinto zokuhlanza, izinto zokwelashwa, izinto zobuciko.
Ukuhlanza iCaddy B041
Thatha yonke impahla yakho yokuhlanza, izibulala-magciwane, amathuluzi, noma imishanguzo yezokwelapha uhambe nayo nale Twin Tote Caddy. Amaphakethe amabili ajulile, anesisindo eside anikela ngesitoreji esivulekile sezinto zokuhlanza namathuluzi, ngisho nezinto ezincane azilahleka. T
Ithuluzi Handle Caddy B-039B
Iphakethe elikhulu eligcwele lingabamba izinto eziningi zokuhlanza noma amathuluzi wehadiwe